Robbery ‣ Zimbabwe Voice
zimbabwevoice_1July 15, 2021
Harare man robbed of US$18,000 cash while violating curfew
By Mutsa Makuvaza A Harare motorist lost US$18,000 cash which was grabbed from him as he was driving in Waterfalls well into curfew hours. Police spokesperson Assistant Commissioner Paul Nyathi confirmed the incident saying the man was robbed this Tuesday evening by four unidentified suspects who were driving an unmarked Toyota Wish vehicle. “A 36 year old man who was…
Kombi crew robs passenger of US$2,000… Police impound kombi
POLICE in Sakubva have arrested the driver and conductor of an illegal pirate kombi for allegedly teaming up with an accomplice to rob a passenger of US$2 000. The gang pushed the passenger off the vehicle after committing the offence. The victim quickly reported the robbery at Sakubva Police Station and detectives tracked the commuter omnibus, resulting in the arrest…
A 28-YEAR-OLD Harare man yesterday appeared before magistrate Estere Chivasa on allegations of robbing and raping seven women. The alleged serial rapist, Coaster Kabvuratsiye was not asked to plead when he appeared before Chivasa on 14 counts of rape and robbery. Prosecutor Panganai Chiutsi told the court that sometime between April 2019 and February 2020, Kabvuratsiye disguised himself as a…